Sawirrada todobaadkii tagay iyo Afrika - BBC News Somali
23 Febraayo 2018
Xulashada sawirradii ugu wanaagsanaa todobaadkan Afrika
Image caption Ma ahan wax aad arki kartid maalin walba maroodi hawa sare ku jira muuqaalkiisa. Maroodiyaal badan ayaa Arbacadii lasoo dhaafey laga wareejiyey goobtii lagu xanaaneyn jirey ee ismaamulka Nyeri ee dalka Kenya.
Image caption Balse markan dad ayaaa duulayay. waxaa ciyaarahan lagu soo bandhigay caasimadda Ivory Coast ee Abidjan.
Image caption Dalka Zimbabwe, dad badan ayaa isu soo baxey si ay ugu murugoodaan hoggaamiyihii dhaq dhaq dhaqaaqa isbadal doonka ee dimuqraadiyadda Morgan Tsvangirai, kaasoo geeriyooday isagoo 65 sano jir ah.
Image caption Isla maalintaasi, hooyo ayaa ku dhashey ilmo isbitaal ku yaalla magaalada Jubba, xarunta dalka Suudaanta Koonfureed. Wadankani waa mid kamid ah goobaha adduunka ugu halis badan in ilmo lagu dhalo.
Image caption Haween kamid ah dadkii soo halgamey, ayaa Addis Ababa ku xusay xasuuqii Talyaanigu ku laayey dad gaarayey 20,000 oo Itoobiyaan ah, 19-kii Febuary, 1937-dii.
Image caption Dadka reer Libya ayaa sameeyey dabaal deg ay ku xusayaan sanad guuradii toddobaad ee kasoo wareegtay kacdoonkii xukunka lagaga tuurey hoggaamiyihii hore ee Muammar Gaddafi.
Image caption Dalka Masar ayaa haatan u diyaar garoobay doorasho. Taageerayaasha ayaa boorkan ku dhajiyey toddobaadkan caasimadda, kaasoo xambaarsan sawirka madaxweyne Sisi.
Image caption Koonfurta Africa kama aysan dhicin doorasho, laakiin waxey yeelatey madaxweyne cusub. Cyril Ramaphosa ayaa halkan kasoo muuqday intii aanu u jeedin qaranka khudbadda sanadlaha ah. Talow haweeneyda agtaagan mdaxweynaha maxay aragtay?
Image caption Dhanka kala ee dunida ee Koonfur Korea, ciyaaryahanka reer Ghana ee ciyaarta dharka la isku dhajiyo ee qalfoofta Akwasi Frimpong ayaa barey gabadhiisa yar saaxiib cusub.
Image caption Laakiin Kenya, hadal hayska ayaa ahaa in loo gudbayo tartanka kan xiga. - Ciyaaraha dalalka Barwaaqo Sooranka ayaa ka dhacaya Australia bisha April ee soo socota.
Xigashada sawirrada waa AFP iyo EPA